पूर्व प्रधानन्यायाधीश नै रविको पक्षमा, छुट्ने आशा बढ्यो ! – All top Here
Home/समाचार/पूर्व प्रधानन्यायाधीश नै रविको पक्षमा, छुट्ने आशा बढ्यो !
पूर्व प्रधानन्यायाधीश नै रविको पक्षमा, छुट्ने आशा बढ्यो !
काठमाडौं। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले रवि लामिछाने खराब मानिस नरहेको बताएकी छिन् ।खबरवाणी नामक युट्युव च्यानलसँगको कुराकानीका क्रममा कार्कीले न्यायालय कसैको प्रभावमा नपर्ने बताएकी छिन् । ‘रवि लामिछाने खराब मानिस होइन जस्तो लाग्छ’, उनले भनिन्, ‘रविले यति ठूलो अभियान चलाउँदा एउटा मान्छेलाई यसो गर्छन् जस्तो लाग्दैन ।’
कार्कीले भनेकी छिन्, ‘नि*र्दोष व्यक्तिले सफाइ पाउनुपर्छ । मु*द्धा चलिहाल्यो । अदालतमा गइसकेपछि मु*द्धा चल्छ । उनले सफाइ पाउँछन् । मलाई विश्वास लाग्छ ।’रवि लामिछानेका विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता शुम्भु थापाले दिएको अभिव्यक्ति उचित रहेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले बताइन्।
सरकारले मु*द्धा चलाएको कुरा जनताले मन नपाराएको कार्कीले बताइन् । ‘उनले भ्र*ष्टाचार र जनताको वि*रुद्धमा एउटा इमेज बनाएका छन् । स्वस्फुर्त रुपमा जनता सडकमा आएको हो’, कार्कीले भनिन्, ‘उहाँले न्याया पाउनु हुन्छ ।’
कार्कीले मु*द्धाका विषयमा सडक तताउन नहुने बताइन् । रवि लामिछानेले न्यायालयबाट न्याय पाउने उनको भनाइ छ ।राज्यले जनतालाई बोल्न दमन गर्‍यो भने सरकार नटिक्ने उनले बताएकी छिन् । न्यायालयमा एक–दुई जना दवावमा पर्नेहरू भएपनि न्यायाधीशहरू नि*ष्पक्ष भएर न्याय दिने पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले बताइन् ।
उनले रवि लामिछाने मात्रै नभइ यस्ता मु*द्धाका प्रकृतिलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि हेर्ने गरेको भन्दै न्यायालयमाथि अविश्वास गर्न नहुने बताइन् ।
‘न्यायामाथि मलाई विश्वास छ । न्यायाधीशहरूमाथि विश्वास छ’, उनले भनिन्, ‘कोही–कोही न्यायाधीश पार्टी र नेतासँग डराउने होलान् । सबै न्यायाधीश त्यस्तो छैनन् ।’
दुखद खबर। अलपत्र ३५ यात्रु बोकेर काठमाडौंबाट छुटेको बस दुर्घटना
नेपालका १५ जिल्लामा फैलियो कोरोनाभाइरसको संक्रमण (विवरणसहित)
सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरीको १४ राउण्ड गोली भरिएको पेस्तोल हरायो